ချမ်းမြ | MoeMaKa Burmese News & Media
Interview with U Win Tin - 2011 NLD Economic Resolution and so on ...
>Letters - Name Change in Burma - General becomes President ?
>Reactions on NLD's decision
>Gas pipeline diplomacy
>စကဿာပူမြူမန်မာူပည်သားမဵား ကန်ႚကကြ်
Posts Tagged ‘ ချမ်းမြ ’
နှစ်ဆန်း၁ရက် မန္တလေးမြို့တွင်း ပရိတ်ရွတ်ကြ ငါးလွှတ်ကြ ချမ်းမြ၊ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၈ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ မန္တလေးမြို့ ရပ်ကွက်များတွင် အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြပြီး...
သင်္ကြန်အကျနေ့ မန္တလေးမြို့ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် မနက်ပိုင်း မြင်ကွင်းများ (သတင်းဓာတ်ပုံ – ချမ်းမြ) ။ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ...
ချမ်းမြ – “နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုပြီးရင် ငါတို့ အမှိုက်ကောက်ရမှာ အသေချာပဲ သူငယ်ချင်း”
Than Htay Maung ချမ်းမြ – “နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုပြီးရင် ငါတို့ အမှိုက်ကောက်ရမှာ အသေချာပဲ သူငယ်ချင်း” (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးတာ နဲ့ Seminary...
ဇွန် ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက်နေ့များတွင် မန္တလေးမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် BKK Night Market(Mandalay) ပွဲမှပုံရိပ်များ သတင်းဓာတ်ပုံ ချမ်းမြ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၇ ...
ချမ်းမြ – “မန်းဟန် နဲ့ မန်းသင်္ကြန် ကို ဒီနှစ် နန်းဆန်စေချင်တယ်”
ချမ်းမြ – “မန်းဟန် နဲ့ မန်းသင်္ကြန် ကို ဒီနှစ် နန်းဆန်စေချင်တယ်” (မိုးမခ) မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၇ ဒီနှစ် မန္တလေးသင်္ကြန် ကို အရင်ရင်နှစ်တွေကလိုမဟုတ်ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေဆီမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့...
မန္တလေးက ဟိန္ဒူပွဲတော် မြင်ကွင်း (ချမ်းမြ) (မိုးမခ၊ မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၇) မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၁၇ – ညနေ ၃ နာရီအချိန်က မန္တလေးမြို့ ဧရာဝတီမြစ် ဂေါဝိန်ဆိပ်ကန်းတွင် ဟိန္ဒ...
“ကလေးစာပေပွဲတော် (မန္တလေး)” သတင်းဓာတ်ပုံ – ချမ်းမြ၊ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၇ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ကပူပေါင်း၍ ကလေးစာပေပြပွဲနှင့် စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို မန္တလေးမြို့ရှိ (MIIT) ခန်းမတွင် ဇန်နဝါရီလ၂၇...
ချမ်းမြ – မန္တလေး အိမ်တော်ရာစေတီ ဆီမီး (၉၀၀၀) ပန်း(၉၀၀၀) ပူဇော်ပွဲ မြင်ကွင်း
ချမ်းမြ – မန္တလေး အိမ်တော်ရာစေတီ ဆီမီး (၉၀၀၀) ပန်း(၉၀၀၀) ပူဇော်ပွဲ မြင်ကွင်း ( မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၆ ...
ချမ်းမြ – “​ခေတ်​မှီ ဖွံ့ဖြိုး​သောနိုင်​ငံ​တော်​သစ်”
ချမ်းမြ – “ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံတော်သစ်” (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၆ ဖေဖေက ညညဆို ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းပြီး စာရင်းလုပ်တယ် မေမေက ညညဆို ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းပြီး မေတ္တာသုတ်ရွတ်တယ် ညီလေးက ညညဆို ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းပြီး...
ချမ်းမြ – “ဘဘ ဦးဝင်းတင်​”
ချမ်းမြ – “ဘဘ ဦးဝင်းတင်​” (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၆ အ​မှောင်​​ခေတ်​မှာ​ မွေး ​ထောင်​ထဲတွင်းမှာ လူဖြစ်​ စာ​ပေ​ခေတ်​ပါ သစ်​လွင်​ခဲ့တဲ့သူ အခု သူကွယ်​လွန်​တာ (၂) နှစ်​ပြည့်ပြီ...
ချမ်းမြ – “Facebook ပေါ်က ကျွန်တော်နားမလည်သော စကားလုံးများ” (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၆ ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်တွင် လူတိုင်းကိုယ်စီ ဖုန်းကိုင်နေကြပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမှာ ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ဆို အရာသည် လူအသုံးများသည်။...
ချမ်းမြ – မန္တလေး စာအုပ်ငှားဆိုင်များ အလွမ်း
ချမ်းမြ – မန္တလေး စာအုပ်ငှားဆိုင်များ အလွမ်း (မိုးမခ) မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၆ အခုဆိုရင် မန္တလေးမြို့မှာ စာအုပ်ငှားဆိုင်လေးတေ ပပျောက်ပြီး မြို့ရဲ့ နေရာတော်တော်များများကို ဖုန်းဆိုင်များ၊ စတိုး ဆိုင် များနှင့်...
ချမ်းမြ – “​သတင်းစာ”
ချမ်းမြ – “​သတင်းစာ” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၆ ​နောက်​​ကျောစာမျက်​နှာက ​နာ​ရေးသတင်းကို အဖွင့်​ အမှာစကား ​ပြောကြားပြီး စက်​ခလုပ်​နှိပ်​၍ ဖွင့်​လှစ်​ခဲ့သည်​ လင်​မယားနှစ်​ဦး ကွာရှင်းပြတ်​စဲခြင်းကို ​ဝန်​ကြီးများ မိတ်​ဆုံစားပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်​...
ချမ်းမြ – “ရုပ်​​သေးရုပ်​”
ချမ်းမြ – “ရုပ်​​သေးရုပ်​” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၆ လိုသလိုကြိုးဆွဲ ကခိုင်းလို့ရတယ်​ ဘုရင်​လည်းရှိတယ်​ ဘီလူးလည်းရှိတယ်​ ဝန်​ကြီးလည်းရှိတယ်​ လူကြမ်း​တွေလည်း ရှိတယ်​ စိတ်​တိုင်းကျ ဖြစ်​​စေတယ်​ လိုအပ်​သလို ခိုင်းလို့ရတယ်...
MoeMaKa ကို Android ဖုန်းမှာ Offline အနေ နဲ့ ဖတ်နိုင်ပါပြီ (ချမ်းမြ) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၆ ပထမဆုံး Android ဖုန်းမှာ Install လုပ်လိုက် ရုံပါဘဲ။...
ချမ်းမြ – နေပြည်​​တော်​ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၆ ပင်​နီ​တိုက်​ပုံတွေ မြို့​လေးကိုလာ​တော့ မြို့​လေးက အလိုက်​သိစွာ မိုးအုံ့​ပေးတယ်​ လွှတ်​​တော်​ကို ပင်​နီ​တိုက်​ပုံ​တွေဝိုင်းတဲ့​နေ့က ဆင်​ဖြူ​တော်​​တွေက မြူးပြီးကတယ် ဒါ…..အတိတ်​​တွေ လား….? ဒါ…..နမိတ်​​တွေလား…..?...
ချမ်းမြ – “ငါ့မဲတစ်​ပြားဟာ…..”
ချမ်းမြ – “ငါ့မဲတစ်​ပြားဟာ…..” (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ငါ့မဲတစ်ပြာဟာ မဝင်း​မော်​ဦးကိုအမျှ​ဝေဖို့အတွက်​ ငါ့မဲတစ်​ပြားဟာ ကိုပါကြီးအတွက်​ ငါ့မဲတစ်​ပြားဟာ ​ဒေါ်ခင်​ဝင်းအတွက်​ ငါ့မဲတစ်​ပြားဟာ ​ကျော်​ကိုကို အတွက်​ ငါ့မဲတစ်​ပြားဟာ ဖမ်းဆီးခံ​ကျောင်းသား​တွေအတွက်​ ငါ့မဲတစ်​ပြားဟာ...
ချ မ်းမြ – အ န်​ တီအေး(၀တ္ထုတို) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅ (၁) “ဒန်​အိုး​ပေါက်​​​ ဒယ်​အိုး​ပေါက်​...
ချမ်းမြ – ”အစာငတ်​ခံ​ရေးတဲ့ကဗျာ”
ချမ်းမြ – ”အစာငတ်​ခံ​ရေးတဲ့ကဗျာ” (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ လိုအပ်​လာလျှင်​ ကျွန်​​တော်​တို့ အရိုးကိုချိုး စည်းရိုးကာရမယ်​ ရဲ​ဘော်​​အောင်​မှိုင်းဆန်း တရားကို နတ်​​စောင့်​တယ်​ ဒီစကားက မြန်​မာနိုင်​ငံအတွက်​တော့ မှားတယ်​ အများညီ ဤကို...
ချမ်းမြ – တော်​လှန်​​ရေး​တွေပြီးတဲ့​နေ့ ငါမင်းဆီကိုဆက်​ဆက်​ပြန်​လာမယ်​…လမင်း
ချမ်းမြ – တော်​လှန်​​ရေး​တွေပြီးတဲ့​နေ့ ငါမင်းဆီကိုဆက်​ဆက်​ပြန်​လာမယ်​…လမင်း (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၅ အ​ရေး​တော်​ပုံဆိုတာ ကန့်​လန့်​ကာဆွဲချပြီး အ​မှောင်​ချလိုက်​လို့လည်း ပြီးဆုံးသွားမယ့်​အရာမဟုတ်​ဘူး… လမင်း သူတို့က​ခေါ်​တော့ ဒုက္ခသည်​ပေါ့​ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို​တော့ ​တော်​လှန်း​ရေးသမား​ပဲ တကယ်​​တော့…. လမင်း​ရေ...